Blog of Nyein Chan Yar: 2010.08
[Unicode version is here]
နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် အချစ်ဆိုတာ ရှိသလား။ စွဲလမ်းမှု သက်သက်၊ သံယောဇဉ် သက်သက် လောက်နဲ့ ဘယ်လောက် ချစ်သည် ပြောပါစေ ယူလည်းပြီးရော အိမ်ထောင်ရေးက ရီးစားဘဝက ထင်ထားကြသလို မဟုတ်တော့ဘူး ဖြစ်လာရော။ ခွင့်လွှတ် တတ်မှု၊ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှူတွေ ဆိုတာလည်း တဘက်သတ် ဆိုရင် ကြာလာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အားလျော့သွားတာပဲ။
အဓိကကတော့ ရိုးသားမှု၊ ပွင့်လင်းမှု တွေလိုတယ်။ အရေးကြီးတာက နှစ်ဦး နှစ်ဘက်လုံးက ဒီလို ရိုးသားမှု၊ ပွင့်လင်းမှု လိုတာ။ နောက်ပြီး flexible ဖြစ်ဖို့၊ open minded ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်။
ဥပမာ - ဘာမဟုတ်တာလေးကို ငြင်းခုံကြတယ်။ မနိုင်နိုင်အောင် ပြောရာကနေ စကားလုံးပြင်းထန်သွားရော။ တဘက်က ပြန်လည် ခြေပရာကနေ စကားလုံးတွေက ပိုပြင်းထန်လာတယ်။ နောက်ဆုံး ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ထိ ဖြစ်ကုန်ရော။ ပြောခဲ့ ဆိုခဲ့တာတွေက တစ်ဦးစီ ရင်ထဲမှာ အစိုင်အခဲတွေ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ကြရော။
ဒီစာသားလေးကို သဘောကျတယ်။ => Don't letalittle dispute injureagreat relationship!! Remember the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
ရုပ်ရှင်တွေမှာပဲ ကြည့်ပေါ့။ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင် မိန်းမ ကလည်း ယောင်္ကျားကို ဘယ်လို handleလုပ်ဖို့ ။ ဘယ်လို manipulate လုပ်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ စဉ်းစားကြတယ်။ ယောင်္ကျား ကလည်း မိန်းမ ကို ဒီလိုပဲ။ ဒီကတည်းက ဘယ်မှာ ရိုးသားမှု ရှိတော့လို့လဲ။ ဘယ်မှာ ရိုးသား ပွင့်လင်းမှု နဲ့ transparency ရှိတော့လို့လဲ။ နောက် ရှိသေးတယ် . . . ဘေးက အပေါင်းအသင်းတွေ မြှောက်ပေးတာ။ (မိဘ၊ မောင်နှမတွေလည်း ပါတယ်) သွေးထိုးပေးတာကို ယုံတာ။ ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက်ထက် အပေါင်းအသင်းတွေကို ပိုယုံနေမှတော့ ဘယ်ကောင်းတော့မလဲ။ တစ်ဖက်ကလှည့် စဉ်းစားရင် အဲ့လိုပြောတဲ့ အပေါင်းအသင်းကလည်း မိတ်ဆွေကောင်း မဟုတ်ဘူး။
အင်း.. ခက်တော့ခက်ပါတယ်။ ဒါတွေက လူတွေရဲ့ ပင်ကိုယ် စိတ်သဘောထားတွေ ပေါ်မူတည်တာပါပဲ။
အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီး မိန်းမကို မရနိုင်သေးဘူး။ ဟီးဟီး :P
နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့အကျင့်။ သူတို့ မကျေနပ်တာ တစ်ခုခုရှိတာနဲ့ စိတ်ကောက်ပစ်လိုက်တာပဲ။ တစ်ချို့ အသေးအမွှား ကိစ္စလေးကို ဆိုရင် ယောင်္ကျားလေးက သတိမထားမိရင် ပြီးရော။ ဘာကောက်မှန်းလည်းမသိ။ မေးရင်လည်း "ဘာကြောင့် ကောက်တယ်ဆိုတာတောင် မသိတာ ငါ့ကို ဂရုမစိုက်လို့ပေါ့" လို့ တွေးကြတာ။ အဲတော့ ပြောရရင် မပွင့်လင်းမှုပဲ။ မကျေနပ်တာ ဘာလဲဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမှ သိမှာပေါ့။
နောက် တစ်ခြားမိန်းကလေးနဲ့ သဝန်တိုတာကို ပြန်ရွဲ့တိုက်ပြီး တခြား ယောင်္ကျားလေးနဲ့ တွဲပြတာဆို အရမ်းဆိုးတယ်။ တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေက ယောင်္ကျား အာရုံစိုက်စေတဲ့ နည်းပညာ အဖြစ်သုံးတာလည်းရှိတယ်။ ဒါတွေကတော့ လုံးဝကို မရိုးသားမှုပဲ။ ဟန်ပြတွဲခံရတဲ့ သူမှာလည်းထိခိုက်တဲ့ အပြင် သူ့ဘက်က အရမ်းစွဲလမ်းသွားတာ ဘာညာတွေ ဖြစ်လာရင် အန္တရယ်ကြီးတဲ့ ပြဿနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
Posted by dathana at Thursday, August 12, 2010 No comments:
Labels: emotional, how-to, love, Myanmar, relationship, Thoughts
[Zawgyi-one version is here]
နှဈကိုယျ့တဈစိတျ အခဈြဆိုတာ ရှိသလား။ စှဲလမျးမှု သကျသကျ၊ သံယောဇဉျ သကျသကျ လောကျနဲ့ ဘယျလောကျ ခဈြသညျ ပွောပါစေ ယူလညျးပွီးရော အိမျထောငျရေးက ရီးစားဘဝက ထငျထားကွသလို မဟုတျတော့ဘူး ဖွဈလာရော။ ခှငျ့လှတျ တတျမှု၊ စှနျ့လှတျ အနဈနာခံမှူတှေ ဆိုတာလညျး တဘကျသတျ ဆိုရငျ ကွာလာတော့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အားလြော့သှားတာပဲ။
အဓိကကတော့ ရိုးသားမှု၊ ပှငျ့လငျးမှု တှလေိုတယျ။ အရေးကွီးတာက နှဈဦး နှဈဘကျလုံးက ဒီလို ရိုးသားမှု၊ ပှငျ့လငျးမှု လိုတာ။ နောကျပွီး flexible ဖွဈဖို့၊ open minded ဖွဈဖို့လညျးလိုတယျ။
ဥပမာ - ဘာမဟုတျတာလေးကို ငွငျးခုံကွတယျ။ မနိုငျနိုငျအောငျ ပွောရာကနေ စကားလုံးပွငျးထနျသှားရော။ တဘကျက ပွနျလညျ ခွပေရာကနေ စကားလုံးတှကေ ပိုပွငျးထနျလာတယျ။ နောကျဆုံး ရနျဖွဈကွတဲ့ထိ ဖွဈကုနျရော။ ပွောခဲ့ ဆိုခဲ့တာတှကေ တဈဦးစီ ရငျထဲမှာ အစိုငျအခဲတှေ ဖွဈကနျြခဲ့ကွရော။
ဒီစာသားလေးကို သဘောကတြယျ။ => Don't letalittle dispute injureagreat relationship!! Remember the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
ရုပျရှငျတှမှောပဲ ကွညျ့ပေါ့။ အိမျထောငျပွုတော့မယျဆိုရငျ မိနျးမ ကလညျး ယောင်ျကြားကို ဘယျလို handleလုပျဖို့ ။ ဘယျလို manipulate လုပျနိုငျဖို့ ဆိုတာ စဉျးစားကွတယျ။ ယောင်ျကြား ကလညျး မိနျးမ ကို ဒီလိုပဲ။ ဒီကတညျးက ဘယျမှာ ရိုးသားမှု ရှိတော့လို့လဲ။ ဘယျမှာ ရိုးသား ပှငျ့လငျးမှု နဲ့ transparency ရှိတော့လို့လဲ။ နောကျ ရှိသေးတယျ . . . ဘေးက အပေါငျးအသငျးတှေ မွှောကျပေးတာ။ (မိဘ၊ မောငျနှမတှလေညျး ပါတယျ) သှေးထိုးပေးတာကို ယုံတာ။ ကိုယျ့ အိမျထောငျဖကျထကျ အပေါငျးအသငျးတှကေို ပိုယုံနမှေတော့ ဘယျကောငျးတော့မလဲ။ တဈဖကျကလှညျ့စဉျးစားရငျ အဲ့လိုပွောတဲ့ အပေါငျးအသငျးကလညျး မိတျဆှကေောငျး မဟုတျဘူး။
အငျး.. ခကျတော့ခကျပါတယျ။ ဒါတှကေ လူတှရေဲ့ ပငျကိုယျ စိတျသဘောထားတှေ ပျေါမူတညျတာပါပဲ။
အဲ့ဒါတှစေဉျးစားပွီး မိနျးမကို မရနိုငျသေးဘူး။ ဟီးဟီး :P
နောကျတဈခုက မိနျးကလေးတှရေဲ့ စိတျကောကျတတျတဲ့အကငျြ့။ သူတို့ မကနြေပျတာ တဈခုခုရှိတာနဲ့ စိတျကောကျပဈလိုကျတာပဲ။ တဈခြို့ အသေးအမှား ကိစ်စလေးကို ဆိုရငျ ယောင်ျကြားလေးက သတိမထားမိရငျ ပွီးရော။ ဘာကောကျမှနျးလညျးမသိ။ မေးရငျလညျး “ဘာကွောငျ့ ကောကျတယျဆိုတာတောငျ မသိတာ ငါ့ကို ဂရုမစိုကျလို့ပေါ့” လို့ တှေးကွတာ။ အဲတော့ ပွောရရငျ မပှငျ့လငျးမှုပဲ။ မကနြေပျတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောမှ သိမှာပေါ့။
နောကျ တဈခွားမိနျးကလေးနဲ့ သဝနျတိုတာကို ပွနျရှဲ့တိုကျပွီး တခွား ယောင်ျကြားလေးနဲ့ တှဲပွတာဆို အရမျးဆိုးတယျ။ တဈခြို့ မိနျးကလေးတှကေ ယောင်ျကြား အာရုံစိုကျစတေဲ့ နညျးပညာ အဖွဈသုံးတာလညျးရှိတယျ။ ဒါတှကေတော့ လုံးဝကို မရိုးသားမှုပဲ။ ဟနျပွတှဲခံရတဲ့ သူမှာလညျးထိခိုကျတဲ့ အပွငျ သူ့ဘကျက အရမျးစှဲလမျးသှားတာ ဘာညာတှေ ဖွဈလာရငျ အန်တရယျကွီးတဲ့ ပွဿနာဖွဈသှားနိုငျတယျ။
Labels: emotional, how-to, love, marriage, relationship, Thoughts